10 Ndị na - eme mkpọsa nke ọdịnaya enweghị ike ịbelata ileghara anya | Martech Zone
At MGID, anyị na-ahụ ọtụtụ puku mgbasa ozi ma na-ejere ọtụtụ nde ndị ọzọ ozi kwa ọnwa. Anyị na-agbaso arụmọrụ nke mgbasa ozi ọ bụla anyị na-eje ozi ma soro ndị mgbasa ozi na ndị mbipụta ọrụ rụọ ọrụ iji bulie ozi ndị ahụ. Ee, anyị nwere ihe nzuzo anyị na-ekerịta naanị ndị ahịa. Ma, enwerekwa usoro onyonyo buru ibu nke anyi choro ịkọrọ onye ọ bụla nwere mmasị Mgbasa ozi arụmọrụ, na-enwe olileanya na ọ ga-abara ụlọ ọrụ ahụ dum uru.
Ndị a bụ usoro iri 10 na - agbanwegharị mgbasa ozi nwa amaala ugbu a:
Akụkọ Nlere Anya - Iji ree ngwaahịa ị ga-enyerịrị ndị mmadụ akụkọ ịga nke ọma. Ha ga-emeghachi omume nke ọma karịa Jane ma ọ bụ Jeremy, ya bụ, onye dị ka ha, karịa onye a ma ama ma ọ bụ nde mmadụ. Ndị mmadụ metụtara kachasị mma na onye nwere nsogbu ahụ ike na ịma mma, otu ụdị teknụzụ na mkpa ụlọ, otu njem na mmekọrịta mmekọrịta. ha zutere na ịntanetị. Kọọ akụkọ ahụ: Tinye foto nke “ihe ndị na-agwụ ike ha na-eme tupu ha ezute onwe ha.” Kekọrịta okwu ole na ole banyere otu o siri sie ike ịchọta egwuregwu zuru oke taa - mgbede ndị owu na-ama, nri oyi, ndị enyi lụrụ. Ikwu ihe ịma aka ndị a na akụkọ ga-enyere onye na-agụ ya aka ịmata ya ma metụta mgbasa ozi ahụ.
Blọgụ na Instagram Stars - Nke a yiri ahịa ire-ọnụ, mana ọ bụ nke onwe gị maka otu ị na-achọ iru. Ka ha kwalite onyinye gị, bụrụ dike nke mgbasa ozi gị, ndị agha ha nke ndị na-eso ụzọ ha ga-anọnyekwara gị. Nke a abụghị otu ihe iji iji ọdịnala ndị a ma ama akwado. Kpakpando ndị a dị n'ịntanetị nwere ihe ndị na-eso ụzọ ha na-atụle mmekọrịta ha na ha.
Video Akwukwu - Topic Ọchịchọ maka mgbasa ozi a na-ahụ anya na-ebili. Ihe kpatara omume a bụ mmụba nke njikọ ịntanetị na-enweghị ohere, na-enye ndị ọrụ ntanetị ohere ịlele ma gee vidiyo na ekwentị ha. Ndị mmadụ nwere ike na-ele ya na-enweghị ụda (dịka ịnọ ọdụ n'ahịrị ma ọ bụ na onye na-agwọ ọrịa) ma ọ bụ naanị na-ege ntị mgbe ịnya ụgbọ ala. Taa onye ọ bụla chọrọ ịmụ ihe ma ọ bụ nwee obi ụtọ n'oge oge enweghị ọrụ n'oge ụbọchị ha. Ihe vidiyo ga - abụ ihe na - atọ ụtọ maka ndị ọrụ mkpanaka ka mmepe na teknụzụ ekwentị na ọrụ data na - abawanye.
Infographics na animation gifs bụ ngwaọrụ dị ike - Ihe mere ha ji arụ ọrụ bụ na ha na-adọrọ uche n'ụzọ ọ bụla, mara mma ma dị mfe nghọta. Ha dịkwa nnọọ mfe ịmepụta. Enwere ọtụtụ isi mmalite enwere ike dị n'ịntanetị nke na-enyere gị aka ịchọta ozi ịchọrọ igosi. Mmekọrịta mmekọrịta ga-agafe oge na akụkọ akụkọ maka ịba uru.
Akuko Ajuju - Mgbe ị na-ede ọdịnaya gị, jiri ajụjụ ndị na-ege gị ntị nwere ike ịjụ. Nye ndị mmadụ azịza site na ọkachamara. Kedu ọkachamara? I kpebiri.
Ihe Mgbasa Ozi --tọ - Nke a bụ ọnọdụ ọzọ na-ekpo ọkụ ụfọdụ ndị mgbasa ozi na-efu. Ike gwụrụ ndị mmadụ ịdị na-eji ihe akpọrọ ihe. Inwe obi uto agaghi eme ihe ojoo. Jiri nje memes na ihe ọchị na-anọchite anya ha niile mana ọdịnaya kachasị njọ. Ọ na-eme ka ndị mmadụ nọrọ jụụ ma nwee obi ụtọ. Ọchị bụ ihe dị mma mgbe niile ịpị ma soro ndị ọzọ kerịta.
“Ugbu a” bọtịnụ - Ọ bụ maka ịchekwa oge na mkpali na-enye afọ ojuju, aghụghọ aghụghọ nke na-eme ka ndị ọrụ na-arụ ọrụ ọbụlagodi na ha anabataghị ya. Ndị mmadụ hụrụ n'anya n'ezie "zụta ya ugbu a" na bọtịnụ "lelee ugbu a" n'ihi na ha na-akpọ ịzụta enweghị ntụpọ ịzụta ma kwe nkwa ahụmịhe ọhụụ.
Ajụjụ - Kinddị ọdịnaya a aghọwo nke kachasị oke na Facebook maka ọkara mbụ nke 2016 ma na-enye oku zuru oke iji mee ihe. Pụrụ ịmalite na ihe dị mfe dị ka njikọ gị website, ma ọ bụ ma eleghị anya ọbụna ahaziri njikọ ngwaahịa na-atụ aro.
Ihe Episodic - Nke a bụ 2016 si "na-ekpo ọkụ tiketi": Ọdịnaya tiwara n'ime isi na ike iji dị iche iche ad mkpọsa dị ka nke ọma. Inweta ozi ma ọ bụ ntụrụndụ na ngalaba na-eme ka ndị ọrụ nwee mmasị na ịlaghachi maka ihe ndị ọzọ n'ihi na ha na-anụ ọkụ n'obi ịhụ na ịnụ mmelite ọ bụla. Ichechi ozi na-enyere aka mee ka ndị na-ege ntị na-etinyekwu oge karịa oge ebe atụmanya na-eme ka iguzosi ike n'ihe ndị ọrụ na ike nke ahụmịhe ahụ.
Mgbasa ozi oru ndi obodo - Ọtụtụ ụlọ ọrụ na-eji mgbasa ozi ala ugbu a iji nweta ndị ahịa nwere ike ịntanetị. MGID bụ netwọọdụ mgbasa ozi mgbasa ozi na-ebute nsonaazụ kacha mma maka ndị mbipụta, ndị mgbasa ozi na ndị ahịa. Usoro anyị ji arụ ọrụ nke ọma na-eme ka ndị na-ebipụta nkwupụta nke ego na-agbanwe agbanwe site na ntinye asụsụ nke ozi nkwado na mmemme na-enweghị nsogbu.
Mụtakwuo maka Nnweta Ọbịa nke Mba
Anyị na-agba gị ume ịnwale ụdịdị ọdịnaya a. Họrọ ndị ga - akacha gosipụta ngwa ahịa gị, gwakọta ha ma ọ bụrụ na ọ bara uru, ma kwadebe iji lelee ọkwa aka gị.
Tags: animation gifsndị na-ede blọgụmgbasa ozi ọdịnayausoro mgbasa ozi ọdịnayaepisodic ọdịnayafun-centric na mgbasa oziNdị na-emerụ ahụinstagramAjụjụ ọnụ gbara ha gburugburuInfographics AhịaVidio Ahịamgnwa afọ mgbasa oziamaala ahịa ahịaMgbasa ozi arụmọrụugbu a mkpọchinyochaịkọ akụkọ
Site na ngwakọta dị iche iche nke azụmaahịa na ahụmịhe ụlọ ọrụ Fortune 500, Michael Korsunsky nwere nchịkọta pụrụ iche nke nyocha ahịa, ịkpa agwa omume, na teknụzụ na njikwa njikwa ndị na-ege ntị, na-enyere ya aka inye aka MGID Inc. si uto na US Tupu MGID, Korsunsky nwere onye isi osote onye isi oche na AUDIENCEX, ụlọ ọrụ mgbasa ozi na ụlọ ọrụ na-ere ahịa na-eweta njedebe ngwụcha na njedebe dijitalụ maka ụdị na ndị ọrụ ụlọ ọrụ. Companylọ ọrụ ahụ nyere atụmatụ ọgụgụ isi na azịza ihe omimi dị omimi maka ndị mgbasa ozi na-arụ ọrụ arụmọrụ. N'ime iri afọ abụọ gara aga, Korsunsky jigidere onye isi n'ọchịchị na ọnọdụ dị iche iche na Cyberdefender, Legacy Interactive, Bidz, Modnique na ndị ọzọ.